तिघ्राको मसल्स बलियो बनाउन अपनाउनुहोस्, यी तरिका – Etajakhabar
तिघ्राको मसल्स बलियो बनाउन अपनाउनुहोस्, यी तरिका
ताजा खबर :- खुट्टालाई बलियो बनाउनको लागि यसको मसल्स बलियो हुन् निकै आवश्यक हुन्छ । केही एक्सरसाइज छन्, जसले तिघ्राको मसल्समा असर पुर्याई यिनलाई बलियो बनाउँछ । यदि दिनहुँ २० मिनेट यी एक्सरसाइज गर्न सकेमा तिघ्रालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । फिटनेस एक्सपर्टका अनुसार, तिघ्राको मसल्स बलियो बनाउने यी ५ एक्सरसाइज यस्ता छन् ।
सिधा उभिनुहोस् र अब दुवै हातलाई अगाडी तर्फ सिधा राख्नुहोस् । घुँडालाई मोड्दै बस्नुहोस, जसरी तपाई कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ । अब श्वास छोड्दै फेरि माथि उठ्नुहोस् । यस एक्सरसाइज १० देखि १५ पटक गर्नुहोस् ।
दुवै हातमा ५ देखि १० किलो डम्बल लिएर उभिनुहोस् । अब दायाँ खुट्टा अगाडी र घुँडाबाट मोड्नुहोस् । साथै बायाँ खुट्टालाई जमिनमा टेकाउनुहोस् । यहि स्टेप बायाँ खुट्टाको साथमा गर्नुहोस् । दिनहुँ यसलाई १० देखि १५ पटक गर्नुहोस् ।
दुवै हात अगाडी तर्फ सिधा राख्नुहोस् र घुँडालाई मोड्दै बस्नुहोस्, जसरी तपाई कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ । अब माथितर्फ जति सक्दो उफ्रिएर फेरि पहिले कै पोजिशनमा आउनुहोस् । यस व्यायामलाई लगातर १० देखि १५ पटक गर्नुहोस् ।
ढाडको बल पल्टिएर दुवै खुट्टालाई माथि उठाउनुहोस् । बिस्तारै दायाँ खुट्टालाई तल ल्याउनुहोस् र सिधा गर्नुहोस् । फेरि बायाँ खुट्टा तल ल्याउँदै दायाँ खुट्टा माथि उठाउनुहोस् । यसलाई ८-१० पटक दोहोर्याउनुहोस् ।
ढाडको बल पल्टिएर खुट्टालाई बिस्तारै-बिस्तारै माथि तर्फ उठाएर सिधा गर्नुहोस् । केहि समय रोक्नुहोस् र फेरि खुट्टालाई तल ल्याएर ४५ डिग्रीको कोण बनाएर रोक्नुहोस् । यसलाई ८-१० पटक दोहोर्याउनुहोस् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २२, २०७४ समय: १:४५:०२
सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गरे के हुन्छ ?
चुरोट पिउने बानि छ भने यो पढेपछि तपाई चुरोटको एक सर्को तान्न पनि डराउनु हुन्छ
काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शहरका विभिन्न चोक तथा बजार दुर्गन्धित बन्दै
सुनसान अस्पताललाई किन दिइँदैछ सम्बन्धन ?
केसीको समर्थन गर्दै बिरामी हेर्न छोडेर आन्दोलन गर्न थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बिज्ञप्ति जारि गर्दै भन्यो : चिकित्सकीय धर्मविपरीत नगई सधैँझैँ बिरामीको स्वास्थ्योपचारमा संग्लन हुनु
डा. गोबिन्द केसीको विपक्षमा जनमत जुट्दै, अमुक लुटेराको स्वार्थपूर्ति गर्न केसीको अनसन
अस्पतालका सिकिस्त बिरामी छाडेर जब सेतो कोटधारी चिकित्सकहरु काठमाडौंको सडकमा उत्रिए (फोटोफिचर)
डा गोविन्द केसीलाई १० मिनेटको अल्टिमेटम दिदैं प्रशासनको दियो बाहिर ननिस्किए बल प्रयोग गर्ने चेतावनी
डाक्टर केसीले खोजे जुम्लाबाट काठमाडौ आउन प्राइभेट हेलिकप्टर, राखे यस्तो अडान